Ngithathe Unyaka Ngiye Ezingqungqutheleni, Nakhu Okwenzekile | Martech Zone
NgoMsombuluko, Mashi 20, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 10, 2018 Douglas Karr
Izinyanga eziyishumi nambili zokugcina kube matasa kakhulu emlandweni webhizinisi lethu. Sakha kabusha ukushicilelwa kwethu kweMartech, sathutha amahhovisi ethu ngemuva kweminyaka engu-7, futhi sakha kabusha ngokwethembeka izinsizakalo zethu kusukela phansi. Nginqume ukweqa izingqungquthela phakathi nonyaka ukuze ngigxile ebhizinisini. Eqinisweni, angizange ngithathe uhambo oluya eFlorida sonke isikhathi, lapho ngithanda ukuphumula futhi ngivakashele uMama wami. (Umama wayengajabule kakhulu ngalokhu!)
Ngaphambi kwalesi sikhathi, ngangikhuluma cishe kuzo zonke izingqungquthela ezinkulu zokumaketha eNyakatho Melika futhi ngakhuluma naphesheya kwezilwandle. Eqinisweni, enye yezingqungquthela engizithandayo yenzeka manje - Umhlaba Wezokumaketha Kwezenhlalo. Ngikuthanda kakhulu ukukhuluma ezingqungqutheleni - kuyanginika amandla futhi ngihlangana nabaningi benu enginobudlelwano bedijithali nabo kepha engingakaze ngihlangane nabo mathupha. Ngingathanda ukuhlanganyela ukuthi kungithinte kanjani mina nebhizinisi lami.
Yeqa Izingqungquthela Zokumaketha - Okuhle
Kuyathakazelisa ukuthi eminyakeni embalwa eyedlule, ibhizinisi lethu lalakhiwe kakhulu ngamakhasimende avela ngaphandle kwase-midwest. Sasinamakhasimende kulo lonke ugu lolwandle kanye neminye imikhiqizo emikhulu kakhulu. Ngenkathi lokho bekungumsebenzi omuhle futhi izabelomali zasogwini zichitha kahle maphakathi ntshonalanga, sazabalaza ukugcina lobo budlelwano.
Namuhla, wonke amaklayenti ethu aphakathi ne-midwest futhi sinobudlelwano obuhle nawo. Uma behlangabezana nenkinga, ngivele ngigxumele emotweni bese ngidlula ngiyobasiza. Akuyona inketho enamakhasimende angaphandle kwezwe. Ngakho-ke, uma ufuna ukwakha ubukhona obumangalisayo ekhaya, ukuya ezingqungqutheleni zokumaketha akusona isidingo sangempela.
Njengoba ngibuka abangane bami abagxuma engqungqutheleni online, nginemizwa exubile. Ukubuka izinhlungu zokuhamba nemindeni eshiywe emuva akujabulisi. Angiphuthelwa yizikhumulo zezindiza, ngihlala ngaphandle kwemithwalo yami, nesikhathi engingekho emsebenzini nasemndenini.
Ngabe ngikhumbule yokufunda? Ngizothembeka ukuthi angifundanga lutho kunoma iyiphi ingqungquthela enkulu engingazange ngiyifunde online. Eqinisweni, ngokugxila emsebenzini wamakhasimende nemiphumela yawo, ngifunde kakhulu ngokugcina ikhanda lami kulo mdlalo lapha ekhaya.
Ngithola abethuli bezingqungquthela bejabulisa, kepha ukujula nemininingwane kuvame ukuntuleka ngokwanele ukuthi ngisebenzise ukuqonda kwabo ukusebenza ekhaya. Uma ukhuluma engqungqutheleni, empeleni lowo umgomo wakho… ngoba lokho kusho ukuthi enye yalezi zinkampani ezilalelini ingakuqasha ukuthi ubonisane nazo.
Ukweqa Izingqungquthela - Okubi
Njengoba ngishilo ngenhla, amakhasimende ethu asuselwa kude nemikhiqizo emikhulu namakhasimende ezwe. Ngisenza iphrojekthi eyodwa ngisebenza nayo Dell, kepha akukhona ukuzibandakanya okujwayelekile kwe-ejensi yethu njengoba ngibamba ngokubamba iqhaza uchungechunge lwe-podcast oluzokhishwa kungekudala. Eqinisweni, uhambo lwami olukhulu olulandelayo luzoba UDell EMC Umhlaba. Lelo thuba lavela ngozakwethu owayesebenza futhi eya eDell, noma kunjalo, ngakho-ke angikwazi ukulibala ngempela kule ndatshana.
Ukungasebenzi ngemikhiqizo emikhulu kunciphisa iphrofayela yakho kancane embonini. Kuyinto embi ukusho, kepha izinkampani eziseMidwest azisebenzi nama-ejensi angasebenzi ngemikhiqizo emikhulu. Ngokujabulisayo, sisize imikhiqizo emikhulu eyanele abantu abasithatha ngokungathi sína edolobheni.
Masivume, izinkampani ezihambela izingqungquthela zine- isabelomali sokumaketha. Ngokuzimisela, bekukuncane kakhulu ukufaneleka kwabaholayo engqungqutheleni… uma inkampani yabo ibichitha izinkulungwane ezimbalwa zamaRandi kwithikithi lengqungquthela, babona ukuthi ukutshalwa kwezimali kwezentengiso bekukukhulu. Ngingahlangana nabamabhizinisi abayishumi engqungqutheleni futhi bonke babenesabelomali. Ngingahlangana namabhizinisi ayishumi ekhaya kanti elinye lawo linebhajethi. Izingqungquthela zingukutshalwa kwemali okuhle kucebo lakho lokuthengisa.
Ngenkathi ngishilo ukuthi angifundanga lutho ezingqungqutheleni, isikhathi sokuya emsebenzini nomndeni ukugxila is kuphuthelwe. Ngithole kusihlwa kwami ​​ngihleli endaweni yokucima ukoma nabathengisi engikanye nabo kujabulisa. Sasivame ukwabelana ngempumelelo nokwehluleka okungenakhulunywa ngenkulumo noma isethulo, futhi ukuzwa lawo maqiniso kwakukhuthaza ngoba wazi ukuthi awuwedwa emzabalazweni nasempumelelweni yakho.
Ukweqa Izingqungquthela - The Ugly
Uyalibona igama lami, Douglas Karr, kwabiwe ohlwini oluphezulu? Uyangibona kuma-podcast kazwelonke? Uyangibona kuma-webinars kazwelonke? Cha. Ngenkathi ngikhulise ukufundwa kwethu online, qhubeka nokuthola ithoni labalaleli ku izingxoxo zokumaketha, futhi wethula ngempumelelo eyisimanga Umphakathi waseMartech, Ngilahlekelwe ithoni yokugqama engake ngaba nayo.
Angingabazi ukuthi ukuya ezingqungqutheleni, ukuxhasa lezo zingqungquthela, nokuthola iziphuzo endaweni yokucima ukoma nontanga kwami ​​bekungigcina ngibhekiwe.
Umngcele wedijithali uyamangalisa, kepha abantu bangabantu futhi basadinga ukuxhumana ukuze benze umbono ongacimeki. Ngenkathi ngiyi-superstar enjeni yami uGambino, angifakwanga ohlwini lwe-Top 100's online ngonyaka odlule. Ngenkathi ngiya ezingqungqutheleni, ngangibalwa njalo kuma-Top 25 ontanga yami.
Ngakho… Ingabe Kunendaba?
Ukuthi kunendaba yini noma cha kuya ngokuthi izinhloso zakho ziyini. Uma konke kumayelana nokwaziwa, yebo. Uma konke kumayelana ne-ego, yebo kunjalo yebo. Uma kumayelana nokusebenza nemikhiqizo yephrofayili enkulu, yebo. Uma kumayelana nokuhlangana kwabaholi embonini yakho, yebo. Uma kumayelana nokufunda ubuciko bakho? Meh.
Kimi, mathupha, ijaji lisaphumile. Ngiyakuthanda ukubonwa, kepha angiqiniseki ukuthi kunengqondo kakhulu kwezezimali. Ibhizinisi lami selinempilo namuhla kunanini ngaphambili. Futhi, senza ukubonakala okukhulu ekhaya e-Indianapolis, sakha isitudiyo esikhungweni esisebenza nabo lapho sifundisa khona amabhizinisi amancane, sinikeza amathuba abafundi edolobheni, futhi sisiza iningi elingenzi nzuzo edolobheni.
Tags: ukuhambela izingqungquthelaeyaziwaIzinhlumarketingIzingqungquthela Zokumakethaabaholi bezokukhangisamemesukungaziwaukukhuluma esidlangalaleniezokuxhum emhlabeniabathengisi abaphezulu
Mar 22, 2017 ku-10: 16 AM
Yize ngifunde kakhulu ku-inthanethi kunezingqungquthela, ngithanda ngokweqiniso ukuya ezingqungqutheleni nokuhlala nabantu abakhuluma ulimi lokumaketha kwedijithali. Angikaze ngiye kubo, nokho, ngoba zibiza kakhulu.
Mhlawumbe uma ngenze ukubhuloga okwanele ngale ndaba ukuze ngithole okulandelayo, khona-ke ngizokhokhelwa ukuba ngiye futhi ngikhulume, kunokuba ngishintshele ikhadi lesikweletu ukuthola ithuba lokuba lapho.
Mar 22, 2017 ku-11: 21 AM
Ngikujabulele ukufunda le Doug. Unokwazi kahle ukuthi udinga ini, nokuthi izidingo zebhizinisi lakho ziyini.
Mar 23, 2017 ku-1: 31 AM
Ngiyabonga Marty! Kuthathe iminyaka engu-8 kuphela?
Mar 26, 2017 ku-7: 46 PM
Ngiyabonga, uDoug. Umshayeli wami wokuhambela izingqungquthela ubelokhu eyizikhulumi ezisezingeni. Ezikhathini eziningi engikhetha ukuzihlalela ekhaya, ngonge izinkulungwane zamadola ngokuthenga nje izincwadi zabo - lezo zincwadi eziqinisekise ukufaneleka kwephaneli labo. Vele yize lokhu kungekona ukuthatha indawo kwesipiliyoni sangempela nokuxhumana… kufanele kufanele ukucatshangelwa yi-anyones. Ngenxa yalokho, ngizizwa ngithola insiza ecebile futhi ejulile engingayivakashela kaninginingi.